Nagu saabsan - BEIJING SHOUGANG GITANE CILMI CUSUB CO., LTD
BEIJING SHOU GANG-GITANE MAALADAHA CUSUB EE TAG., LTDwaa soo saare takhasus gaar ah leh taariikh 60 sano kabadan, soosaarista fiilooyin iskujira oo gaar ah iyo xargaha iskudhafka kululeeyaha, aaladaha iska caabinta korantada, biraha birta ah iyo fiilooyinka muquuninta ee warshadaha iyo dalabka iwm. oo ah 39,268m² qolka shaqada. GITANE waxay leedahay 500 karaani oo ay kujiraan 30% waajibaadka farsamo. SG-GITANE waxay heshay shahaadada nidaamka tayada ee ISO9002 sanadkii 1996. GS-GITANE waxay heshay shahaadada nidaamka tayada ee ISO9001 sanadkii 2003.
Shirkadda SG-GITANE waa shirkad tiknoolajiyad sare ku takhasustay soosaarka siligga alwaaxda elektaroonigga ah ee warshadaha iyo madaniga ah, xarig, xarigga saxda ah ee daawaha ah, silig bir bir ah oo si fudud u goynaya, qalabka xambaara qiiqa baabuurta, birta iska caabbinta xawaaraha xawaaraha sare iyo tareenka tareenka magaalooyinka, cajalad amorphous iyo xudunta magnetic, keydinta tamarta qalabka kululaynta korantada, silig bir ah oo aan qafiif ahayn, xarig iyo walxo gaar ah oo alxanka ka sameysan. SG-GITANE lafteeda waxay leedahay xirmo dhammeystiran oo xarumo wax soo saar ah oo ay ka mid yihiin dhalaal, xoqitaan iyo rogrogis, sawir qaadis, daaweyn madaxa ah, toosin iyo nadiifin iwm Iyadoo la adeegsanayo qalab casri ah iyo tiknoolajiyad. Shirkadani waxaa lagu gartaa tiknoolajiyad wax soo saar oo gaar ah, tartamada qalabka koontaroolka tayada, tayada xasiloonida wax soo saarka, iyo kala duwanaanshaha qanacsanaanta darajooyinka iyo qeexitaannada.
Shirkadda SG-GITANE waxay leedahay "shahaado aqoonsi shirkadeed tiknoolajiyadeed oo sare", "Shahaadada Xarunta Ganacsiga Teknolojiyada Beijing" iyo "Iskuduwaha isdhexgalka cilmi baarista jaamacadda ee warshadaha degmada Changping". Sannadkii 2010, shirkadda waxaa lagu qiimeeyay inay tahay "halbeega caadiga ah" ee nidaamka maaraynta jaangooyooyinka wax soo saarka badbaadada ee ay samayso Ururka Badbaadada Shaqada ee Beijing; laga soo bilaabo 2010 ilaa 2012, waxaa lagu qiimeeyay inay tahay Degmadda Changping ee Beijing iyada oo ay xukuntay dawladda Dadka Degmadda Beijing Changping "unugga horumarsan ee ilaalinta tamarta"; sanadihii 2011 iyo 2012, waxaa lagu qiimeeyay inay tahay "cutubka horumarsan ee ilaalinta tamarta" ee degmada Changping ee magaalada Beijing iyadoo ay hogaaminayaan kooxda hogaamineysa dhowrista tamarta iyo yareynta isticmaalka Degmada Changping.
Sannadkii 2011, waxaa lagu qiimeeyay inay tahay "halbeegga istaandarka" ee halbeegga soo saarista nabadgelyada ee shirkadaha warshadaha ee Degmada Changping ee Maamulka Degmada Changping ee badbaadada shaqada; Bishii Meey 2012, birta birta ah ee chromium aluminium birta silig fiber silig ah oo ay soo saartay shirkadeena waxay heshay shahaado qaran oo muhiim ah oo cusub oo ay soo saartay Wasaaradda sayniska iyo teknolojiyadda; sanadkii 2012, ayaa sumadda shirkadda "SPARK" la siiyay sumadda caanka ah ee Beijing; masuulka ka ah Isu geynta "GB / t-1234 iskudhafka kululeeyaha korontada ee iska caabinta sare" "" Fe Cr Al bireed loogu talagalay xamuulka birta malabka ee xamuulka qaada qiiqa gawaarida gawaarida "," GB / t36516 Fe Cr al silig silig ah oo lagu sifeeyo filterka baabuurta "," GB / t13300 habka tijaabada nolosha degdegga ah ee isku-dhafka sare ee korantada korantada ";
Sannadkii 2015, waxay noqotay cutub bandhig ah oo ka mid ah guulaha is-beddelka ee shirkadaha teknolojiyadda sare ee Beijing; 2015, waxay ku guuleysatay abaalmarinta hal-abuurka ee Iskaashiga Cilmi-baarista Jaamacadda Shiinaha ee Warshadaha oo ay soo saartay Jaamacadda Iskaashiga Cilmi-baarista Iskaashiga Cilmi-baarista ee Shiinaha; sanadkii 2015, "mashruuca isbadalka guul gaadhista cilmi baarista ee waxqabadka sare ee qalabka cusub ee nadiifinta qiiqa baabuurta" ayaa ku guulaystay abaalmarintii ugu horaysay ee abaalmarinta tabarucaada tayada wax soo saarka tayada leh ee xarunta qiimaynta wax soo saarka ee Beijing. U hoggaansamida horumarka iswaafajinaya ee shirkadaha iyo bulshada, shirkadda ayaa maal-ku dhowaad 10 milyan oo yuan si loo xoojiyo dhismaha ilaalinta deegaanka iyo tas-hiilaadka keydinta tamarta, waxayna ku guuleysatay cinwaanka unug sare oo biyo-badbaadin ah oo ku yaal Beijing.
SG-GITANE waxay fiiro gaar ah u leedahay baahida suuqa iyo horumarinta wax soo saarka cusub, waxay leedahay koox maskax iyo kartiba leh oo shaqaale farsamo ah. Ku soo dhawow shakhsiyaadka kala duwan ee wareegyada iyo asxaabta gudaha iyo dibaddaba si ay u soo booqdaan, u qabtaan wadahadallo ganacsi oo ay ugu faafiyaan iskaashi dhaqaale us.we waxaan jeclaan lahayn inaan siino adeeg hufan iyo alaab aad u fiican macaamiisha.
Silig kululaynta korontada, Fiilooyinka kululeeyaha korontada, Heerkulka High silig koronto, Alaab-qeybiye koronto kululeeyaha, Silig iska caabinta korontada, Silig koronto oo adkaysi u leh,